स्लट - यो के हो?
कम्प्युटर हार्डवेयर (.. राम, ध्वनि कार्ड, भिडियो कार्ड, आदि) विशेष इन्टरफेस मार्फत जडित - स्लट। यो पीसी विस्तार मौका CONNECTORS। तिनीहरूले पनि विस्तार कार्ड वा एडेप्टर भनिन्छ हुन सक्छ।
राम को स्लट - यो के हो?
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, यो पीसी राम जडान गर्न टर्मिनल छ। सामान्यतया Motherboard मा कम से कम दुई यस्तो स्लट छन्। यो सारा सिस्टम को काम बिना असम्भव छ जो कुनै पनि बोर्ड, को आवश्यक तत्व हो।
यसलाई विभिन्न connectors मा Motherboard को निर्माण को वर्ष आधारमा, प्रयोग गर्न सकिन्छ स्मृति विभिन्न प्रकारका लागि अभिप्रेरित। हरेक वर्ष सुधार फलाम, Motherboard निर्माताहरु अनुकूल र स्लट छ भन्ने तथ्यलाई दिइएको। यो सामान्य अभ्यास हो, त्यसैले हामी खाता र connectors यो राम को विकल्प छ जसको लागि मा लिन छ।
यो पनि स्लट को महत्त्वपूर्ण नम्बर हो। कम लागत motherboards उपलब्ध मात्र2जडान इन्टरफेस, तर त्यहाँ तिनीहरूलाई ठूलो हुनेछ4थप हो, सजिलो को लागि प्रयोगकर्ता राम को राशि वृद्धि गर्न छ। तर हामी सबै मोड्युलहरू लिन पनि भने, गठन-अप यस्तो 8 जीबी रूपमा,4जीबी संग स्लट प्रतिस्थापन गरेर गर्न सकिन्छ।
स्लट को प्रकार
को Motherboard मा इन्टरफेस को पहिलो आदिम थिए। तिनीहरूले राम प्रकार 30 पिन SIPP खडा। तर हरेक वर्ष आफ्नो नयाँ मानक बाहिर र उहाँलाई अन्तर्गत बोर्ड मा इन्टरफेस जडान गर्न समायोजन गर्नुहोस्। त्यसैले निम्न कनेक्टरों थिए:
72 पिन SIMM;
168 पिन DIMM;
184 पिन CRIMM spacer;
184 पिन DDR;
240 पिन DDR2;
240 पिन DDR3;
सबैभन्दा आधुनिक मानक, motherboards मा प्रयोग गरिन्छ जो, - DDR4 स्मृति लागि कनेक्टरों। समय को कुरा - सम्म, कुनै DDR5 स्मृति यसको उपस्थिति छ, तर। त्यसपछि, खैर, देखिने र डाटा चिप्स लागि कनेक्टरों संग नयाँ motherboards।
भिडियो कार्डहरू लागि विस्तार स्लट - यो के हो?
गरेको पुरानो भिडियो जडान इन्टरफेस स्पर्श छैन गरौं। AGP र PCI एक्सप्रेस - आधुनिक ग्राफिक्स चिप्स दुई विद्यमान प्रकार को या त मार्फत जडान गर्न सकिन्छ। यी इन्टरफेस भिन्नता आफ्नो ब्यान्डविथ र शक्ति क्षमता छ। त्यहाँ अन्य कम महत्वपूर्ण मतभेद छन्।
यो सधैं उच्च throughput राम्रो छ भनेर विश्वास गरिएको छ। तथापि, व्यवहार मा, चिप को उच्च throughput प्रदर्शन धेरै प्रभावित छैन।
motherboards सीमित नम्बर AGP- वा PCI एक्सप्रेस स्लट छ। तिनीहरूले भिडियो कार्ड जडान गर्न एक PCI-मात्र एडेप्टर संग सुसज्जित छन्। तर, तिनीहरूलाई लागि कार्डहरू धेरै सानो छ, र तिनीहरूले सामान्यतया एक घर कम्प्युटरको लागि उपयुक्त हो।
तर मात्र होइन ग्राफिक्स कार्ड र राम connectors को माध्यम द्वारा जोडिएको छन्। आवाज, नेटवर्क कार्ड, र पनि प्रोसेसर तिनीहरूलाई मार्फत तरिकामा जोडिएको छन्।
स्मृति स्लट - यो संकुचित फ्लैश मेमोरी कार्ड, आदि अक्सर ल्याप्टप इन्टरफेस मा लागि कार्डहरू संकुचित फ्लैश पाइन्छ लागि इन्टरफेस ... आज यो भन्दा साधारण स्तर र धेरै क्यामेरा समर्थन को छ। एकै समयमा संकुचित फ्लैश मेमोरी कार्ड सस्ता छन्।
मेमोरी स्टिक - यो स्लट, विशेष सोनी द्वारा डिजाइन र आज यो डिजिटल जानकारी सबैभन्दा महंगा ढाँचा वाहक छ। र यो मानक छैन आफ्नो तरिका को मात्र छ। प्रो, जोडी: त्यहाँ प्रजातिहरू छन्।
SmartMedia -, एक धेरै पातलो शरीर छ जो SmartMedia लागि एक मेमोरी कार्ड स्लट छ हुनत आफ्नो चौडाइ र एक कार्ड आकार मेमोरी स्टिक भन्दा अलि बढी लम्बाइ। यी कार्डहरू अब धेरै विरलै प्रयोग र बजार छोड्न छन्। त्यसैले तिनीहरूलाई लागि पनि दुर्लभ सकेट।
एक स्लट XD-मा भएको चित्र - Olympus, Toshiba र Fujifilm डिजाइन धेरै सानो मेमोरी कार्ड लागि एउटा सानो कनेक्टर। यो मानक, आज धेरै लोकप्रिय छ कम शक्ति खपत, उच्च गति लेखन र पढाइ, साथै विश्वसनीयता र compactness।
अब तपाईं यसलाई के हो थाहा - एक मेमोरी कार्ड स्लट - र तिनीहरूले के हो। यहाँ उल्लेख स्तर, सुधार गर्दै अप्रचलित र गायब, र आफ्नो ठाउँमा नयाँ छन्।
को प्रोसेसर पनि स्लट मार्फत जडान छन्। इन्टेल र AMD को लागि पूर्ण बिभिन्न इन्टरफेस, एक वा अर्को कम्पनी को प्रोसेसर लागि डिजाइन प्रयोग गरिन्छ।
त्यसैले, 1997 मा इंटेल कम्पनी दोस्रो स्तर को एक क्यास स्मृति2प्रोसेसर विकास एक स्लट 1 Pentium र foolproof तथाकथित, जो मार्फत प्रोसेसर गलत कनेक्टर प्लग गर्न सकिँदैन। निस्सन्देह, यो इन्टरफेस पुरानो र अब आज प्रयोग गरिन्छ, तर 1998 देखि कम्पनी को Pentium3प्रोसेसर लागि2स्लट सारिएको छ।
AMD छैन धेरै पछि पनि छ, तर प्रोसेसर लागि आफ्नो स्लट अत्यन्तै दुर्लभ फरक थिए र आज भनिन्छ स्लट ए, तिनीहरूले हो र केवल पुरानो कम्प्युटर मा थिए। महिला कनेक्टर - एक सकेट (सकेट) को माध्यम ले Motherboard जोडिएको यो बिन्दु प्रोसेसर मा। स्लट संग मामला छ रूपमा परिभाषित सकेट केही प्रोसेसर लागि उपयुक्त छन्।
न्यायकर्तालाई भने, ल्यापटप मामला साधारण एक स्लट हुन्छन्। यो पनि सुरक्षित एकाइ संलग्न र समतल उहाँलाई तान्नुहोस् गर्दैन एक केबल जडान गर्न एक ठाउँ पाउन सक्छन्। कहिलेकाहीं यी केबल यो बरु सन्देहपूर्ण छ हुनत, गिरावट सुरक्षा उपकरण प्रयोग गरिन्छ।
पनि जडान मोडेम, एस कार्ड स्लट छ ल्यापटप, र यति मा। डी त्यसैले, यो आवश्यक छैन तिनीहरूलाई केही फेला पार्न भित्र चढ्नु छ।
शब्द "स्लट" को आधुनिक अवधारणा सामान्यतया राम को एक पल्ट भन्दा जडान गर्न कनेक्टर हो। त्यसैले तिनीहरू "स्मृति स्लट" भन्न गर्दा अक्सर मन राम पट्टीमा छ। यो किनभने धेरै मानिसहरू गलत अर्थ लाउनु गर्न सक्छन्, विचार लायक पनि छ। वास्तवमा यो कनेक्टर छ तापनि र यसको उद्देश्य कुनै पनि उपकरण जडान गर्न सक्छ।
कसरी पीसी मा ग्राफिक्स कार्ड परिवर्तन गर्न
एक राउटर सिस्को कसरी कन्फिगर गर्न?
भाइ Dcp-150c - खरिद गर्नु अघि समीक्षा
प्रिन्टरहरू "Epson" (Epson): छनौट, समीक्षा, विनिर्देशों र वर्णन मा सल्लाह
कम्प्युटर नै रिबुट गर्दा के गर्न
OLED-मनिटर के हो
हरियो-सेतो-रातो झण्डा के अवस्थामा? झन्डा को रंग के?
किन gooseberries र सेतो? को जामुन मा छापे निको गर्न सकिन्छ!
Overlock Juki MO 654DE: प्राविधिक विनिर्देशों, निर्देशन, मूल्य र समीक्षा
पुरातन बिरुवाबाट के खनिज गठन गर्दै हुनुहुन्छ? प्रमुख खनिज
Tsar टावर Kazansky रेलवे स्टेशन - आधुनिक ग्यालरी
बेडरूम लागि सहज पर्दे
Assassins सिद्धन्त4कालो झण्डा: सिस्टम आवश्यकताहरु, जारी मिति र विशेषज्ञ समीक्षा
स्वादिष्ट माछा Pangasius
मेनिनजाइटिस: बच्चाहरु र वयस्क मा प्राय हुन्छ जो लक्षण र रोग को नतिजा,
केतली मा मात्रा हटाउन धेरै तरिकाहरू
जीवनी बोरिस Zhitkova - छोराछोरीको लेखक